FANDRARANA FIVAROTANA OMBY VAVY SY ZANAK’OMBY : Velon-taraina ireo mpiompy ao amin’ny Faritr’i Sofia
Manoloana ny fandraran’ny fanjakana ny mahakasika ny tsy azo amarotana intsony ireo zanak’omby sy ireo omby vavy amin’izao fotoana izao dia maha tsiaro ho voatohitohina ny amin’ny fidiram-bolany ireo vondron’ny mpiompy sy ireo mpividy omby ao amin’ny Faritr’i Sofia. 14 novembre 2017
Misy fiantraikany goavana eo amin’ny fiainana andavanandron’izy ireo ny fandraisana fepetra momba ity tsy fahazoan-dalana ity intsony ka manaitra ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hiaraka hifampidinika hamahana ny olana. Toy ny ao amin’ny tanànan’i Mandritsara, ohatra, dia nanamafy fa mety hampiteraka tsy fandriam-pahalemana ny fanatanterahana izay satria lasa tsy misy intsony indray ny fidiram-bola hiveloman’ireo mponina.
Marihana anefa fa ao anatin’ny vanim-potoana maitso ahitra ireo mpamboly sy mpiompy ankehitriny. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon’ireto mpiompy hatrany dia nampahafantarin’izy ireo fa ny 90%n’ireo omby dia saika omby vavy avokoa ka mananosarotra azy ireo ny tsy hamarotana izany intsony.
Miangavy ny mpitondra fanjakana araka izany ireto vondron’ny mpiompy mba hamela malalaka ny famarotana satria misedra olana goavana ny antom-pivelomana raha toa ka hofefena tsy hatao intsony. Etsy andaniny ny fiakaran’ny vidim-piainana ka tafalatsaka anaty fahasahiranana tanteraka izy ireo. Miandry ny fandraisan’andraikitra avy amin’ny fanjakana aloha hatreto raha ny tatitra voaray hatrany.